विचित्र संसार | suryakhabar.com | Page 10
on: २२ पुष २०७४, शनिबार १२:१६ In: विचित्र संसारTags: जसको माग सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !, वेश्यालयमा आउँछन् यस्ता अनौठा ग्राहकNo Comments
एजेन्सी । वेश्यालयमा अनौठाअनौठा ग्राहक आउँछन् र उनीहरुका माग पनि अनौठा नै हुने गरेको पाईएको छ । कस्ता ग्राहक आउँछन् त बेस्यालयमा पढौं अनौठा तथ्य विश्वको कुनै एक चर्चित वेश्यालयमा एकजना ग्राह...	Read more
फ्लेमिंगो एयरले ल्यायो अनौठो अफर, प्लेनमै सहवास गर्न पाइने !
on: १५ पुष २०७४, शनिबार ११:५२ In: विचित्र संसारTags: प्लेनमै सहवास गर्न पाइने !, फ्लेमिंगो एयरले ल्यायो अनौठो अफरNo Comments
एजेन्सी । आजकल अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरु यात्रुलाई राम्रो भन्दा राम्रो सुविधाहरु दिएर आकषिर्त गर्न लागिपरेका छन् । यो भिडमा एउटा यस्तो एयरलाइन्स कम्पनी पनि छ जसले आफ्ना यात्रुलाई यौन...	Read more
मात्तिने रातमा तन्नेरीहरुले लेखाए यस्तो हर्कत !
on: १५ पुष २०७४, शनिबार ११:५० In: विचित्र संसारTags: मात्तिने रातमा तन्नेरीहरुले लेखाए यस्तो हर्कत !No Comments
एजेन्सी । कहिले कहिं मस्त मात्तिन मन लाग्छ । उन्मुक्त रमाउन मन लाग्छ । वेपर्वाह बहुलाउन मन लाग्छ । सायद यहि मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न होला, वेलायतमा चाहि एक रात मस्त मात्तिने गरिन्छ । बर्षम...	Read more
साउदी अरबका राजकुमारले किने दुनियाँकै महंगो महल, जसको मूल्य सुनेर तपाई चकित पर्नुहुन्छ !
on: ११ पुष २०७४, मंगलवार १३:५० In: विचित्र संसारTags: जसको मूल्य सुनेर तपाई चकित पर्नुहुन्छ !, साउदी अरबका राजकुमारले किने दुनियाँकै महंगो महलNo Comments
एजेन्सी । साउदी अरबका राजकुमारले दुनियाँकै महगों महल किनेका छन् । साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले उक्त महल खरीद गरेका हुन् । फ्रान्सको लुभिजियन्समा भरसाइल इलाकामा रहेको यो महलको अनु...	Read more
आफ्नी प्रेमिका वा नवबिबाहिता श्रीमतीलाई चालु हुन् ! पत्ता लगाउने १२ टिप्स
on: ८ पुष २०७४, शनिबार ०७:२९ In: विचित्र संसारTags: आफ्नी प्रेमिका वा नवबिबाहिता श्रीमतीलाई चालु हुन् ! पत्ता लगाउने १२ टिप्सNo Comments
काठमाण्डौ । तपाईले बिहे गर्नुभयो वा प्रमिकालाई पहिलोपटक यौन सम्पर्क गर्न लाग्दैहुनुहुन्छ, वा आफ्नी नब विबाहिता श्रमतीसंग सुहागरात मनाउन तम्तयार भईरहनुभएको छ । तपाई बुझ्न चाहानुहुन्छ कि मेरो...	Read more
on: २ पुष २०७४, आईतवार ०८:२४ In: विचित्र संसारTags: यौन सम्पर्क भईसकेपछि पनि महिलाहरुले आँखा .......No Comments
एजेन्सी । यौनका विषयमा कैयौं खोज तथा अनुसन्धानहरु हुने गरेका छन् । यौन सम्पर्क गर्दाको सयमा महिलाहरुले किन आँखा बन्द गर्छन् भन्ने विषय पनि अनुसन्धान गर्न र बहस गर्न आवश्यक विषय भन्दै वैज्ञान...	Read more
एजेन्सी । सेक्स जीवनको ठूलो आनन्द हो । मानव जीवनको अस्थित्वका लागि पनि यसको अपरिहार्य छ । सेक्स माया र सन्तान उत्पादनमा मात्र सिमित छैन । विज्ञहरुका अनुसार सेक्सले मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्...	Read more
हरेक मानिसमा लिङ्गको आकार फरक फरक हुन्छ । लिङ्गको लम्बाईको कारणले यौन साथीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्नु भन्नु केवल एक मानसिक धारणा वा भ्रममात्र हो । किनकि महिलाको योनीलाई तीन भागमा बाँड्दा अगाडिक...	Read more
किशोरावस्थामा यौनसम्पर्कको विकल्प नहुन सक्छ । विवाहपूर्व यो एक किसिमले वर्जित विषय हो । केटासाथी हुँदासमेत यौनसम्पर्क राख्न असजिलो हुने स्थितिमा केटासाथी नहुँदा यो थप गाह्रो कुरा हो । तपाईला...	Read more
महिलाले यसरी लिन्छन् चरम सन्तुष्टि ? यस्ता छन् अनौठा तथ्यहरु !
on: १७ मंसिर २०७४, आईतवार ०८:४१ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौँ । महिलाको र पुरुषका आ आफ्नै रुची हुन्छन । त्यसमा पनी पुरुषका भन्दा अझ धेरै थरी रुची महिलामा हुने गर्छन । बिभिन्न खोज बाट यहि तथ्य बाहिर आएको छ । हामीले पहिलाका स्तम्भहरुमा पनि सेक्स...	Read more
नेकपा (एमाले)बाट विजयी भएका वडाध्यक्ष र महिला वडा सदस्य राति रंगेहात पक्राउ ! महिलाका देवर, ससुरा र जेठाजुले घरभित्रै थुनेर गाउँलेलाई बोलाएपछि !!
on: २७ कार्तिक २०७४, सोमबार १५:४१ In: विचित्र संसारTags: No Comments
गौशाला । जलेश्वर नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्ष गएराति आफ्नै दलित महिला वडा सदस्यसँग आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा जलेश्वर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष विजयक...	Read more
किन पर्छ एक बोतल (Billionaire Vodka) विलेनियर भोड्काको मूल्य ४० करोड ? कारण यस्तो रहेछ !!
on: २० कार्तिक २०७४, सोमबार १७:०४ In: विचित्र संसारTags: No Comments
यो कुरा सुन्दा तपाइलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि एक बोतल रक्सिको मुल्य रु ४० करोड हो ! संसारका धेरै मानिषहरु रक्सि पिउने गर्छन । कोहि महँगा-महँगा ब्राण्डेड पिउँछन् भने कोहि सस्तो पर्ने लोक्कल पन...	Read more
लामो समय सम्म आफ्नो पार्टनरसँग सेक्स गर्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो तरिका अप्नाउनुहोस् !!
on: १६ कार्तिक २०७४, बिहीबार १८:०६ In: विचित्र संसारTags: No Comments
लामो समयसम्म सेक्स गर्न या आफ्नो विर्यलाई लामो समयसम्म टिकाउने विभिन्न तरिकाहरु छन् जसले तपाईलाइ सन्तुष्टि दिलाउन सक्छ । आफ्नो सेक्स लाइफलाई सुखले भरिपुर्ण बनाउन यो कुराहरु तपाईले जान्न निकै...	Read more
सेक्स गर्नु अगाडी स्तन बाहेक यी पाँच अंग चलाउदा सन्तुष्टी हुन्छ
on: १ कार्तिक २०७४, बुधबार ०८:३९ In: विचित्र संसारTags: No Comments
सामान्यत पुरुषहरुलाइ आफ्नो महिला यौन साथीलाई कसरी खुसि बनाउने भन्ने बिषयमा जानकारी हुन्छ । तर महिलाको जस्तै पुरुषको पनि शरीरमा अति सवेदनशिल ५ वटा क्षेत्रहरु हुन्छन, जसले पुरुषलाई लट्ठ बनाउदै...	Read more
on: २० आश्विन २०७४, शुक्रबार ००:०७ In: विचित्र संसारTags: No Comments
म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउट...	Read more
on: ३० भाद्र २०७४, शुक्रबार ०९:१६ In: विचित्र संसारTags: No Comments
कुनैपनि महिलाले सम्भोगका बेला चरम आनन्द प्राप्त गर्नका लागि पार्टनरको लिंगको लम्बाइको कुनै भूमिका रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयमा एकमत छैन । लिंगको आकारले महिलाको चरम आनन्दमा फरक पार्छ भन्ने हो...	Read more
सेक्सको समयमा महिला र पुरुष दुवैको दिलको धड्कन १४० प्रति मिनेट सम्म…..१५ तथ्य
on: २४ भाद्र २०७४, शनिबार १५:५५ In: विचित्र संसारTags: सेक्सको समयमा महिला र पुरुष दुवैको दिलको धड्कन १४० प्रति मिनेट सम्म.....No Comments
काठमाण्डौ । सेक्स जो कोहीलाई पनि अनिबार्य चीज हो । सेक्सका बिभिन्न परिभाष गरिएका पनि यसलाई प्रकृतिले दिएको उपहार भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेक्समा जति आनन्द छ त्यती प्रकृतिको संरक्षणका लागी यसक...	Read more
यस्ता छन् महिला गुप्तांग बारेका १० रोचक तथ्यहरु !!!
on: २० भाद्र २०७४, मंगलवार १९:०३ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाण्डौ । महिला गुप्तांग अर्थात् योनी निकै संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । सम्भोगको सन्तुष्टि देखि, गर्भाधान र सन्तान पैदा गराउने मार्गको रुपमा रहेको यो अंग...	Read more
फेरी साकारको अश्लिल गाली सुरु, यस्तो गर्दैछ अब नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले !!
on: २० भाद्र २०७४, मंगलवार १७:०८ In: विचित्र संसारTags: No Comments
सिड्नी । केही सातादेखी सामाजीक सञ्जालमा बिभिन्न अश्लिल गालीहरु गर्दै आएका साकार अधिकारीलाई नेपाल लैजाने तयारी शुरु गरिएको छ । गैर आवाशिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले नेपाली महावाणिज्य तथा नेपाली...	Read more
१३ वर्षीय बालिकाले आफ्नो प्रेमीलाई यस्तो प्रेमपत्र लेखेर गरिन् आत्महत्या !!
on: १६ भाद्र २०७४, शुक्रबार १६:२२ In: विचित्र संसारTags: १३ वर्षीय बालिकाले आफ्नो प्रेमीलाई यस्तो प्रेमपत्र लेखेर गरिन् आत्महत्या !!No Comments
आफ्नो प्रेमी समीर श्रेष्ठको नाममा प्रेमपत्र लेखेर आत्महत्या गरेकी छिन् निर्मला सुनुवारले जो मात्र १३ वर्षकी थिईन् । उनी काभ्रेको रोशी गाउँपालिका १ खहरेपागुकी हुन् भने तत्काल बनेपा ७ स्थित डे...	Read more